नेपाल आज | ‘रविले १० लाख मागे, युवराजलाई साढे तीन लाख बुझाएँ’ (भिडियोसहित)
काठमाडौं । पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा दूरुत्साहन गरेको अभियोगमा टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेसहित तीन जनामाथि अनुसन्धान भइरहेको बेला चितवनका एक पोल्ट्री व्यवसायीले ‘सीधा कुरा जनतासँग’को समूहले आफूबाट साढे तीन लाख रुपैयाँ लिएको दावी गरेका छन् ।
भरतपुर –१५ का तिलक गैरेले पाँच सात महिनाअघि आफूले ‘जनतासँग सीधा कुरा’को कार्यालयमै पुगेर युवराज कँडेललाई साढे तीन लाख रुपैयाँ दिएको बताएका छन् ।
गैरेका अनुसार उनका बाबु लक्ष्मण गैरेलाई उनकै घरमा डेरामा बस्न आएकी अन्दाजी ३५ वर्षकी यमी न्यौपानले बलात्कारको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा पुर्याइन् । यमी गैरेको घरमा डेरामा बस्न आएको पाँच–छ दिनमात्रै भएको थियो ।
यमीको यस्तो आरोपपछि उनले ‘जनतासँग सीधा कुरा’को टोली बोलाइन् । लक्ष्मण प्रहरी हिरासतमा थिए । तिलकको दावीअनुसार यमी आफैले आफ्नो ब्यागमा पाँच लाख रुपैयाँ राखिन् । अनि ‘बलात्कार मिलाउन लक्ष्मणले पाँच लाख रुपैयाँ दिएको बताइन् ।’
सीधा कुरामा यमीको मात्रै कुरा राखेर लक्ष्मणलाई बलात्कारी घोषणा गरियो । र पैसा दिएर बलात्कारको मुद्दा मिलाउन खोज्ने ? भन्दै रविले लक्ष्मणको हुर्मत काढे ।
चर्चित कार्यक्रममा रविका बारेमा यस्तो प्रचार भएपछि अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि जेल पठायो । दिउँसो घरभरी मान्छे भएको बेला ६० वर्षका लक्ष्मण गैरेले बलात्कार गरेको कुरा छरछिमेकी कसैले पत्याएनन् । लक्ष्मणलाई त्यो मितिसम्म कसैले व्यभिचारको बात लगाउन सकेको थिएन । समाजमा उनी माछामासु समेत नखाने सरल प्रकृतिका मान्छे थिए ।
बाबु जेल पुगेपछि तिलक ‘रवि दादा’ भन्दै सीधा कुराको कार्यालय पुगे । उनले आफ्नो बाबुमाथि अन्याय भएको भन्दै न्यायका लागि याचना गरे । उनी आफैं पनि रवि लामिछानेको ठूलो फ्यान थिए ।
उनले रवि लामिछानेलाई यमी न्यौपानेका बारेमा साँचोसत्य उल्लेख गरिदिन आग्रह गरे ।
तिलकको दावीअनुसार यमीले लक्ष्मण गैरेभन्दा अगाडि अरु पाँच जनालाई बलात्कारकै आरोपमा मुद्दा भिराइसकेकी छन् । यमीले स्काभेटर चालक, प्रहरी हवल्दार, झाँक्रीसहितविरुद्ध बलात्कारको मुद्दा लगाएकी छिन् । उनले बलात्कार भनेर जाहेरी दिएर मुद्दा मामिला खेपेका विष्णु आचार्यलाई भने अदालतले सफाई दिइसकेको छ ।
तिलकको भनाइअनुसार कसैलाई बलात्कारी बनाएर पैसा असुल्ने यमीको पेशा नै हो । किनभने एउटै महिलालाई छ–छ जनाले किन र कसरी बलात्कार गर्छन् ?
रविसँग तिलकले यो कहानी भनेर आफ्नो बाबुको विरुद्धमा सीधा कुरामा आएको रिपोर्ट सत्य नभएकोले हटाइ दिन आग्रह गरे । तर कार्यक्रम हटेन । उनले यमीका बारेमा खोजेर रिपोर्ट बजाइदिन अनुरोध गरे । रविले त्यसका लागि आफूहरु विभिन्न जिल्ला पुगेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकोले १० लाख रुपैयाँ लाग्छ भन्ने जवाफ दिए ।
तिलकसँग त्यति रकम थिएन । रविले युवराज कँडेलसँग कुराकानी गर्नु भनेर कँडेलसँग पठाए । युवराज कँडेललाई तिलकले एक दिनपछि साढे तीन लाख रुपैयाँ उनकै कार्यालयमा लगेर दिए । युवराजले भिडियो हटाइदिने बताएका थिए । तर उनको बाबुको भिडियो अहिलेसम्म नहटेको तिलकले सुनाए ।
उनले नेपालआजसँग भने, ‘यमी न्यौपानेलाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेका बाँकी पाँचै जनाका सन्तानलाई लिएर म फेरि आउँछु ।’